Nsuku zonke isantya sobomi siyanda, kwaye i-geografi yethu yokunyuka iyanda. Impumelelo yezoshishino kunye nomsebenzi zibandakanya ukuhamba rhoqo kwezoshishino, imida evulekileyo eyenziwa ukuhamba, kufinyelela kuphela kwiminqweno namathuba.
Ngoko ke, ngokuya kuthi sijamelene nesidingo sokupakisha iisuthi. Ndifuna kakhulu ukuziva ekhaya ekhaya elitsha ngokukhawuleza njengasekhaya. Kule meko, kuyinqweneleka ukuba zonke izinto ezifanelekileyo zifanelekile kwikhegi lokuhamba. Kungabonakala kungaqhelekanga, kwaye kunjalo, ixesha elide ochithayo endleleni, ngaphantsi kwexabiso lemithwalo. Kwaye isizathu asikho ukuba umhambi uyala ngeendlela ezininzi. Amava aqhelekileyo achaphazelekayo.
Esinye sezihlandlo ezibalulekileyo kude nekhaya linyamekela umzimba. Ekhaya, yonke imveliso yokunyamekela isesitfini kwindawo yokuhlambela kwinqanaba leengalo ezolukileyo. Ukuze ungaboni ukuphazamiseka ohambweni, kubalulekile ukucinga malunga nazo zonke izinto ezincinci kwangaphambili. Ngale nto uze uthethe.
Phantse zonke iinkampani zonyango zivelisa iiseti zemveliso yonyango. I-kit egciniweyo yokunakekelwa komzimba ifaka i-gel yerhasi kunye ne-cream ethuthuzayo kunye ne-cream (moistion, milk or cream). Njengengxenye yeesethi, ngamanye amaxesha uhlahlela umzimba, i-shampoo kunye ne-conditioner yeenwele, isepha. Iimveliso zenziwe ngamafomathi aqhelekileyo kunye neziphathekayo, ezipakishwe kwiipayipi zeplastiki ezinezixhobo ezinqabileyo, zokuthintela ukuhamba, kwaye zifakwe kwiingxowa ezincinci ezicwangcisiweyo ezenziwe ngamanzi angenawo amanzi. Ukuba ungeyithobekile, uthenge itekethi enjalo, unokushiya ngokuphepha indlela.
Ngenxa yokuba ngamnye unemfuno eyahlukeneyo kwimveliso yokunyamekela, ikiti yendlela yokunakekelwa komzimba yenziwe yedwa. Okokuqala, kucetyiswa ukuba uthenge isikhwama sokuzicoca okanye isikhwama esingenanto. Esi sikhwama sezonyango sihamba, sinesistim esikhethekileyo (ikhonkco okanye i-loop), apho ingaxinwa khona, kukho amagatsha amaninzi ngaphakathi, ayenziwe ngezinto ezibonakalayo okanye eziphathekayo. Ngaloo ndlela, iziqulatho zesikhwama sezonyongweni zibonakala zibonakala ngokugqibeleleyo, ezenza lula ukukhangela ityhu efunwayo. Kwifom ehluthwayo, isikhwama sezonyakatho asikho ndawo kuneendawo eziqhelekileyo, kodwa kulunge ngakumbi kunokokugqibela.
Endleleni, zonke iindlela zingcono ukuthatha amafomati amancinci, iibhubhu okanye i-flakonchiki 15-30 ml, kodwa ingabi ngaphezu kwama-50 ml. Ngeke kudingeke kwakhona, kwaye umthamo kunye nesisindo somthwalo uya kuncitshiswa kakhulu. Ukupakishwa kweglasi kukuphepheka kakuhle ngenxa ye-fragility, ingqungquthela inokuphulaphula nokuphanga ezinye izinto kwi-ngxowa. Iibhonki ezilahla kakuhle kakhulu kunye ne-shampoo, zinokuthathwa ngokuchanekileyo njengoko kuyimfuneko.
Enye into ebalulekileyo yokwakhiwa kwekiti yendlela yokunyamekela umzimba kukusetyenziswa kweendlela zendalo. Esikhundleni se-shampoo kunye ne-gel yokuhlamba, uthenge i-gel ukuhlamba umzimba kunye neenwele. Iibhotile ezimbini ze-shampoo yeenwele kunye ne-conditioner ziza kutshintsha indawo ye-shampoo ye-conditioner, i-arhente eneempembelelo ezi-2 kwi-1. Esikhundleni seloti yomzimba kunye ne-cream edlayo, thabatha i-lotion ye-cosmetic for body that simultaneously, isondla kwaye inomdla wokuhlutha kwesikhumba. Xa ukhetha ubisi lomzimba, ukhethe ukulungiselela izilwanyana ezijoliswe kwi-skin sensitive. Ukutshintsha imeko, ezinye ukutya kunye nokwakhiwa kwamakhemikhali kwamanzi kunokuchaphazela kakhulu imeko yesikhumba. Ubisi obunjalo luya kunciphisa ulusu, luwenze luhlale luhlale lukhuni, lukhuphe umva wokuqina. Nceda uqaphele ukuba imveliso ihlolwe ngokwesidima kwaye yayinqanaba le-pH elingathathi hlangothi. Ngendlela, ubisi lwezonyongweni ngendlela eya kubonisana ngqo kunye nenendima yezandla.
Ngokwahlukileyo, thengisa i-deodorant, engabonakaliyo kufakwe kwi-kit yendlela.
Xa ukhetha iimveliso zokunakekelwa komzimba, ungalibali ngemilenze yakho, ingakumbi ukuba uhamba uhambo lokutyelela. Ukufika kweli lizwe elitsha, ndingathanda ukubona okusemandleni ngexesha elifutshane. Ukuqwalasela izinto, sihamba emikhondweni yokuhamba, singacingi ngemilenze empofu, kwaye ngokuhlwa siyazikhumbuza ngeenyawo ezivuthayo. Faka i-gel ekhethekileyo ukususa ukukhathala. Ezi gels ziquka iibisi eziyimfuneko enefuthe lokupholisa. Ukudibanisa kunye nokusilalisa okulula, ikhambi liya kunceda ukubuyisela ukujikeleza kwegazi kwaye emva kokuphumla okufutshane imilenze iya kuphinda ifumane ukukhanya kunye nenduduzo. Ukongezelela, kuyimfuneko ukunyamekela i-deodorant kunye nesondlo seenyawo. Kule meko, kungcono ukhethe i-agent 2-in-1, umzekelo, i-cream ephosakeleyo edibanisa ukunyusa kwesikrini kunye nesiphumo se-talc.
Qinisekisa ukuba uthenge imveliso ekhethekileyo ngokucoca ngokukhawuleza nangempumelelo ngaphandle kwezepha kunye namanzi. Ezi gels (emulsions) zivele kwiimakethe zonyakatho ziza kutshanje, kodwa sele zikwazi ukufumana ukuthandwa, kuba ngokukhawuleza uzijwayele ukulungelelanisa. Basebenzisa ii-oyile ezibalulekileyo kunye ne-disinfectants, ezikuvumela ukuba ususe izandla zakho zokungcola kunye ne-microbes ngomzuzu omnye. Kwindlela ebekwe kuyo, qi Baya kunceda ukucoca ulusu lwezandla kunye nomzimba, ukuba kusekho amanzi akukho, kwaye iifutha zokunxilisa i-antiseptic zinefuthe elihle kakhulu lokuncedisa, eliluncedo nakwindlela.
Ingcamango enkulu yokuhamba ngeesampuli. Ngaphandle kwekhaya, kungcono ukwenza ngaphandle kokuvavanya, ukwenzela ukuba ungabongezeli iingxaki kwindawo entsha. Kodwa, ukuba ezi zixhobo zeendlela ezivivinywe ngaphambili, kulungele ukuzisebenzisa. Inzuzo eyona nto kukuba bangenasiphelo kwaye ayithathi indawo.
Kwaye ekugqibeleni kodwa kungengenani, zonke iziphakamiso zingentla zisebenza xa ushiya indawo enobudlova kwiiveki ezi-1-3. Ukuba uhamba ixesha elide, kuyafaneleka ukuba ucinge ukuba izinto ezininzi zokunakekelwa komzimba zilula ukuthenga kwindawo entsha. Izitolo zihlala kuyo yonke indawo, kwaye amaxabiso emveliso yezinto ezihamba phambili zehlabathi ziphantse zahluke kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi.
Inkqubo yomzila ishiywe ukuba incediswe kunye nezixhobo zokunakekelwa ngomlomo kwaye unokukhutshwa ngokukhuselekileyo.
Unokuthintela njani ukubonakala kwemibimbi kunye nesibini?
I-Lip ikhupha ekhaya
Inyama yesilwanyana pâté
I-garlic sauce ye shawarma
I-Lenten casserole ngaphandle kweoli
I-egg ihamba ngokutya inyama
Iisanti kunye neentlanzi 2